Author: Vuramar Gotaxe
Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa irraa. Firaafii diinni koo eenyu kan jedhu hundi haala gahaatiin deebii quubsaa akka argachuu dandayu shakkii hin qabnu. Sirna gadaa Hamma kiyyoo kolonii jala hin seeniniti Oromoon sirna ittiin bulan kan mataa isaanii qabau turan.
Maqaan sirna kanaas Gadaa jedhama. Dhimma jireenya ummata Oromoo fuula hundaan kan ilaalu sirna siyaasa, aada diinagdeefi amantiiti. Sirna hawaasaa guutuu ture jechuudha.
Sirni Gadaa sirnaafi seera Oromoonni ittiin walbulchu, kan duulee roorroo ofirraa ittisu, kan dinagdee isaa ittiin tikfatuufi dagaagfatu, akkaata inni itti waliin jiraatuufi kan hawwiin dhala Oromoo cufa ittiin guutu ture. Sirn kun haala Oromoonni tokkummaan isaanii laaffate kan itti roorrisaa turan Habashaafi Affaar ofirraa deebisuu dadhabe keessatti, haala hawaasaa ilaalerraa, jaarraa 14ffaa keessa biqiluu jalqabee suuta guddatee deeme.
Oromoota sirna akkasii jalatti qindeessuudhaaf yeroo dheeraa fudhate. Gara walakkaa jaarraa 15faa isa lammaffaa keessa sirna gutuun argamuu dandaye. Akkaata himamsa aadaa Boorana kibbaa keessatti yeroon itti Gadaan dhaabbate kanumaan walkipha. Akka mangoddoonni Booranaa himanitti Gadaa jaaruuf yaalii dheeraan eega godhame booda, Gadaan yeroo dheeraaf bifa hojechuu dandayu dhaabbate.
Gadaa kanatti Abbaan Gadaa Gadayyoo Galgaloo ture. Raabni isaa yeroosii Yaayyaa Gulleelee jedhama ture. Eega gaafasii jalqabee Booranni Abbootii Gadaa 61 lakkaawa. Eega Gadaan ijaarame, akka himamsa manguddootti Booranatti waggaa taha jechuudha.
Barri isaa tti dhihaata. Kanaaf, sirni kun ijaaramuun isaa walakkaa jaarraa 15ffaa isa lammaffaa keessa kan jedhame dhugaa taha.
Sirna Gadaa keessatti wanni hundi gadaan oroomo. Lakkooysi yeroo, aadaan, amantiin, jireenyi hawaasaa, ittisi biyyaafi kkf hundi hidhata Gadaa qabu, fakkeenyaaf sadarkaalee Gadaa, goggeessa Gadaa, abaluu abaluu. Bara itti Gadaan sirna gutuu ture sana akka silaa tahutti galmeessuun hindandaymane.
Sana keessaahillee irra guddaan kitzaba baroota dhihooti. Guddinaan odeeffannoon argaman oduu afaaniin kan daddabraniidha. Isaaniis bakka bakkati garagar tahu. Uunkaa jireenya hawaasaa Hawaasa keessatti dhalli namaa kophaa hinjiraatu. Namoota biraa wajji jiraata, hojjataas. Jireenyi dhala namaa walitti hidhaataadha. Hawaasa Oromoo bara Kitaabw keessaa yoo fudhannee akkaataa jiruufii jireenya Oromoo, akkaataa qoodama dalagaa, hariiroo ummanni Oromoo hawaasa keessatti waliinqabau, sirna Gadaa keessatti qaama tokko.
Akkaataan polotikaa sirnichaas uunkaa jireenyya hawaasa Oromootti hidhamee jira. Uunkaa jireenya hawaasa sirna Gadaa keessaa hubachuuf waan kanaa gadii hubachuun barbaachisaadha. Goggeessa Gadaa Miseensaa fi Marsaa Gadaa b. Ilmaan jaarsaafii ilmaan Kormaa d. Sadarkaalee Gadaafi Murnoota Gadaa a.
Gaggeessa Gadaa miseensa fi Marsaa Gadaa: Gadaan tokko waggaa saddeet qaba. Kanaaf, Gadaan waggaa saddeet saddeetiin lakkaawama. Waggaan saddeettan Gadaa tokko maqaa mataa isaa qabaata. Gadaa tokkicha maqaa adda addaa qabaatu. Kun Goggeessa Gadaa ykn miseensa jedhamee waamama. Kun hawaasa Oromoo keessaa, bakka gargaraatti maqaa adda addaa qabata. Tuulama keessatti- Miseensa jedhama. Arsii keessatti- Miseensa jedhama.
Qormaata Gadaa Oromoo bakka bakkaarratti godhameen lakkooysi Goggeessa gadaa bakka heddutti shan. Kan kanarraa adda tahees nijiraa.
Fakkeenyaaf Boorana keessatti Goggeessa Gadaa torba qabaatu jira. Maqaan isaaniifi tartiibni isaaniia kopha kophaafi beekamaadha. Marsaan Gadaa tokkoo waggaa 40 qabaata. Yeroo idiletti laalamu jireenya nam tokkoo keessatti, Marsaa Gadaa lamaatu jira. Isaaniis, Marsaan duraa Gadaa abbaa oromoo tahu, inni lammaffaa Gadaa ilmaati. Ilmi Marsaa tokko fixee, Gadaan isaa kan abbaa tahe, kan itti aanu kan ilmaan isaa taha jechuudha.
Akkuma kanatti itti fufee dabra. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40 akka qabaatu olitti ilaalleerra.
Arsii keessatti miseensi Gadaa tokko waggaa 16 waan qabuuf kanarraa adda. Kanarraa Marsaan Gadaa Arsii keessatti orkmoo 80 taha jechuudha. Kanaas, kiitaaba armaa gaditti mee haa ilaallu. Maqaan Goggeessota Gadaa bakka garagaraatti: Ijoolleen waggaa Gadaa jidduufi gaheeyyiin waggaa Gadaa jidduu yoo Goggeessi Gadaa isaanii tokko tahe hiriyyaa tokko jedhamu. Marsaan Gadaa naannawutti walitti fidee ijoolleefi jaarsoolii hiriyyaa taasisaa.
Marsaan Gadaafi Goggeessi Gadaa akkanatti hiriyyummaa murteessu. Ayyaana gurguddaafi beekamoorratti hiriyyaan wal argee waliin turuudhaan walfaarsa. Aangoo polotikaa keessatti paartii tokko tahu.
Kanaf, iktaaba karaa hawaassfi polotikaa Oromootaa walitti hidhuudha. Gaaffi kana deebisuuf, nama Goggeessa Gadaa isaatiin Gadaa keenya jedha. Gadaa isaa faarsa, kabaja. Kanarraa akka ilaalcha polotikaa baraatti hubachuuf waan Paartii ilaaluun gaarii taha. Hawaasa keessatti paartiileen uumamtu turan jechuudha.
Goggeessi Gadaa shanan paartiilee shan kan ijoolleefii manguddoota hiriyyaa godhuus paartii tokkicha waliin qabaachuudha. Ilmaan kormaafi Ilmaan jaarsaa: Kan hawaasa bakka lamatti qooduudha.
Kun jireenya hawaasa Oromoo bara sirna Gadaa keesaatti akkaataa Qabannoo aangoo polotikaa kan murteessuudha. Warra aangoo polotikaa qabachuuf deemaniifi kanatti hawasa qooda. Kuniis, waggaa Gadaa wajjiin walitti hidhataadha.
Carraan aangoo polotikaa keessaa qooda qabaachuufi dhiisuun isaa yeroo itti dhalaterratti hundeeyfama. Kanaaniis ilmaan Oromoo yeroo dhalatanirraa kaasee ilmaan kormaafi ilmaan Jaarsaatti qoodamu. Akkaataan qoodamaa kuniis, seera umamaa kan hordofu qaba. Isaaniis, bara Gadooma abbootii isaanii keessa waggaa 40 abbootii isaanii eeganii kan dhalatan waan tahaniif sadarkaa Gadaa keessa seenuudhaan miseensa paartii tahuu dandayan.
Kanaaf aangoo polotikaa keessaa qooda fudhachuu dandayu. Ilman jaarsaa warra sadarkaalee Gadaa seenanii miseensa paartii tahuu hindandeenyedha. Kanaafiis aangoo polotikaa keessaa warraa qooda fudhachuu hin dandeenyeedha. Ilmaan jaarsaa warra waliin dhalatan hundaan hiriyyaa tahuu dandayu, jechuun ilmaan oromio wajjiinillee hiriyyaa walii tahuu dandayu.
Eega, hawaasa keessatti Gadoomuuf carraa kan qaban ilmaan kormaa thuu hubanne. Ilmaan kormaa gaafa dhalatanirraa kaasee sadarkaalee Gadaa seenanii akkuma gudachaa deemaniin dalagaa garagaraarratti dirqama polotikaafiis qophaawan. Gadaa Boorana, Maccaa, Tuulamaafii Gujii keessatti qoodamni kun jira. Sadarkaalee Gadaafi Murnoota Gadaa: Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni ilmaan kormaa tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama.
Sadarkaan Gadaa maqaa gurmuu waggaa dhaloota ilmaan kormaati jechuudha. Gurmuu kanaan akkaataan jiruufi jireenya dhala Oromoo hundaatu keessatti murtaawa. Ilmaan kormaatu kormaatu keessa daddabran yoo tahellee, jirenya dhala Oromoo karaa polotikaa, amanti, aadaa, dinagdeefi waraanaafi kkf keessatti kan ilaalu addatti maqaa haaqabaatan malee akkaataan guddinaa, dalagaafii jireenyaa, kan ilmaan Jaarsaa wajjiin tokkuma.
Karaa polotikaatiin garuu, garaagarummaa guddaatu jira. Tahullee sadarkaaleen Gadaa jiruuf jireenya dhala Oromoo mara calaqqisiisa. Sadarkaalee Gadaa garagaraakeessatti ilmaan Oromoo dirqama dalagaa adda addaatu isa eeggata. Yeroon isaas osoo hin gahinnillee waan beekamuuf sadarkaa itti aanuuf isa qopheessaa ture. Sadarkaa Gadaa tokko waggaa saddeet qaba. Sadarkaaleen Gadaa ilmaan kormaa keessa dabran bakka gariitti amala addaa yoo qabaatanillee waliigalatti akka armaa gadiitti keenya.
Dabballooma waggaa 2. Gaammoma waggaa 9- 16 3. Dargaggooma waggaa 24 4. Kuusoma waggaa 32 5. Raaboma waggaa 33 — 40 6.